ချမ်းမြရွှေပြည် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကို ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် အဆင့်မြှင့်တင်မည်၊ ဂိတ်များပြောင်းရေ? - Yangon Media Group
ချမ်းမြရွှေပြည် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကို ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် အဆင့်မြှင့်တင်မည်၊ ဂိတ်များပြောင်းရေ?
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မန္တလေးမြို့ ကျွဲဆည်ကန် ရှိ ချမ်းမြရွှေပြည်အဝေးပြေး ယာဉ် ရပ်နားစခန်းကို နိုင်ငံတကာအဆင့် မီပုံစံအတိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများကို လာမည့် ဇွန်လမှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် စခန်းအတွင်းရှိ ယာဉ်လိုင်းဂိတ်များအနေဖြင့် မြို့ အဝင် တံခွန်တိုင်အဝိုင်းပတ်အနီး ရှိ ယာယီရပ်နားစခန်းသို့ အချိန်မီ ပြောင်းရွှေ့ကြရန် အကြောင်းကြား စာများ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
”မေလကုန်မတိုင်ခင်မှာ အပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အတွက် ယာဉ်လိုင်း ဂိတ်အသီးသီးကို အကြောင်းကြား သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာမှာကို စိုးတာကြောင့် အကုန်လုံးကို ပြောင်း ရွှေ့ဖို့ ညွှန်ကြားရတာပါ။ ခရီးသည် တွေ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ သွား လာနိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ယာဉ် တွေကို ဂိတ်နံပါတ်အလိုက် စနစ် တကျရပ်နားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ဒေသတွေကနေ လာရောက် ကြတဲ့ ခရီးသည်တွေအတွက် ပိုမို အဆင်ပြေသွားပါမယ်။ တက္ကစီ ဂိတ်တွေနဲ့ အနီးဆုံးနေရာတွေမှာပဲ အဝေးပြေးယာဉ်တွေ ဆိုက်ရောက် နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးသွားမှာပါ”ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီမှ ကော်မတီဝင် ဦးကျော်ဇောအောင်က မေ ၃ရက် တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော ကြားသည်။
အဆင့်မြင့်ခရီးသည် နားနေ ဆောင်များ၊ လက်မှတ်အရောင်း ကောင်တာများ၊ ဈေးဆိုင်ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်တန်းများ ပါဝင် မည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၂ဝ၂ဝပြည့် နှစ် နောက်ဆုံးထား၍ အပြီး တည် ဆောက်ရန် လျာထားကြောင်း၊ စု စုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သဘောတူ ညီထား၍ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အသစ်သည် မန္တလေးမြို့ဂုဏ်ဆောင် အထင်ကရနေရာတစ်နေရာဖြစ် လာမည်ဟု ရည်မှန်းထားကြောင်း ချမ်းမြရွှေပြည် အဝေးပြေးယာဉ် ရပ်နားစခန်းမှာ ဧရိယာအားဖြင့် ၁၄ဒသမ ၂ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ယာဉ်လိုင်းဂိတ် စုစုပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်ရှိကာ နေ့စဉ်ယာဉ်စီးရေ ၃၅ဝကျော် ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိကာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများကို M Development Coporation Myanmar ကုမ္ပဏီလီမိတက်က တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ် ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ သိရ သည်။
”လတ်တလောမှာတော့ ပြောင်းရွှေ့ရတာတွေကြောင့် ခရီးသည်တွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အခက်အခဲအနည်းငယ် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ရေရှည်အတွက် တော့ အခုလိုအဆင့်မြှင့်တင်တာ ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ” ဟု ရန်ကုန်-မန္တလေးအသွားအပြန် ပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်လိုင်းဂိတ် တာဝန်ခံတစ်ဦးက မေ ၃ရက်တွင် ပြောသည်။
အရက် မသောက်ဘဲ သီချင်း မဆိုနိုင်ဟု Shawn Mendes ပြော
အေဂျက်နှင့်ပွဲတွင် စီရော်နယ်ဒို ပါဝင်ကစားနိုင်ရန် အလီဂရီ ယုံကြည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည် ယခင်န